Dowladda Somaliya oo Muqdisho ka Masaafurisay Wariyaal Ajaanib ah +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Dowladda Somaliya oo Muqdisho ka Masaafurisay Wariyaal Ajaanib ah +Cod
Wasaarada Warfaafinta Xukuumada Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in Magaalada Muqdisho ka masaafurisay Labo Wariye oo Ajnabi ah, kuwaa oo lagu eedeeyay in qaab sharci daro ah Dalka kusoo galeen.
Ciidamada amaanka Dowlada Soomaaliya ayaa Wariyaashan ajaaniibta ah ka qabtay Hoteel kuyaala Magaalada Muqdisho xili ay doonayeen in ay Siminaar bixiyaan, Waxaana Wariyaashan baaritaan kadib la ogaaday in ay fasax la’aan dalka kusoo galeen.
Wariyaasha Dalka laga Masaafuriayay oo ah Labo Wariye oo u kala dhashay Dalalka Uganda iyo Ghana, ayaa Magaalada Muqdisho u yimid in tababar dhanka Saxaafada ah siiyaan Wariyaal ka howlgala Qaar kamid ah Warbaahinta Magaalada Muqdisho.
Xoghayaha guud ee Ururka Suxufiyiinta Qaranka Nusoj Maxamed Ibraahim Baksitaan, oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Ururkooda soo dhaweenayo Talaabada dalka looga masaafuriyay Wariyaasha ajanaiibta ah uu sheegay in fasax la’aan Dalka yimaadeen.
Sida aan Wararka ku heleyno Wariyaasha la masaafuriyay waxaa Muqdisho keenay Gudoomiyihii hore ee Ururka Saxafiyiinta Qaranka Soomaaliyeed Cumar Faaruuq, kaa oo hada la tilmaamay in uusan wax xil ah ka heyn Bahda Warbaahinta Soomaaliyeed.